Thwebula SMPlayer 19.10 – Vessoft
Isigaba: Abadlali beMediya
Ikhasi elisemthethweni: SMPlayer
SMPlayer – a isofthiwe ukudlala alalelwayo video amafayela ngetakhiwo letehlukene. Isofthiwe kwenza ukushintsha phakathi video kanye amathrekhi audio, ukudlala okuqukethwe DVD noma VCD abathwali, ukuvumelanisa umsindo engezansi, ukudlala amafayela emidya, aphenduka ngejubane elingafani, njll SMPlayer isebenzisa izihlungi esakhelwe in ukususa umsindo, deinterlacing futhi usike izwi livela zomculo. SMPlayer iqukethe inqwaba amathuluzi kanye Equalizer ulungiselele player for izidingo siqu umsebenzisi.
Ukutholakala ehlunga ezahlukene
Ukuvumelanisa yomsindo kanye izihlokwana kokulibala
Sebenza nge Equalizer
Amazwana ku SMPlayer
SMPlayer software ehlobene
I-GOM Media Player – isidlali semidiya esidumile esinezici ezithuthukile zesethingi. Isoftware isekela amafomethi amaningi angezansi futhi ithola ama-codecs angekho kwi-inthanethi.
Lena i-antivirus yanamuhla enezici ezisebenzayo zokulawula ukuphepha kwamakhompyutha amaningana amisiwe ku-inthanethi ngokusebenzisa iphaneli lewebhu kusuka kunoma yiziphi iziphequluli.